Mba. 10 Nkwenye Afọ na Nnọkọ Ọgbakọ Globalwa
Home Mba. 10 Nkwenye Afọ na Nnọkọ Ọgbakọ Globalwa
July 2020 na-egosi ọnwa dị ịtụnanya maka TRF, yana nnukwu ọrụ abụọ mba ụwa na-abịa na mkpụrụ. Anyị na-akwado ịkwanye maka iwu nyocha afọ maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na UK na gburugburu ụwa site na Nkwupụta Mkparịta Nkwado Age Age anyị. N'otu oge ahụ, anyị na-atụnye ọtụtụ ihe na arụmụka zuru ụwa ọnụ banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ site na isonye na 2020 Coalition to End Sexual Exploitation Summit.
Onyinye Regwọ Ọrụ na-ekere òkè na 2020 Coalition to End Sexual Exploitation Online Summit n'etiti 18 na 28 July. Anyị na-enye okwu atọ: Internet Pornography na Adoinscent Brain; Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Internetntanetị na Ndị Ọrụ na Autistic Spectrum Disorders na Mkpa Specialmụ Ihe Pụrụ Iche; na mazọ nke Nchọpụta Ọdịnihu na Nsogbu Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ Jiri. Site na ndị na-ekwu okwu 177 na ndị bịara 18,000 sitere na mba karịrị 100, ọ bụ ihe omume kachasị ukwuu na mpaghara a.
Ozi ọma ahụ bụ na ogbako ahụ bụ n'efu ịga. Ọ bụrụ na nke a were mmasị gị, pịa Ebe a ịdebanye aha taa ma sonyere anyị maka ahụmahụ a dị ịtụnanya.
Intanet ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ụbụrụ na-eto eto
Mary Sharpe bụ onye na-ekwu okwu ogbako na mkparịta ụka kasịnụ nke ụbọchị ahụ na 27 July.
Onyinye Regwọ Ọrụ na-agba ọsọ Ngosipụta na ogbako a. Enwere asọmpi iji merie otu akwụkwọ ise nke akwụkwọ Gary Wilson - Brain gị na Porn.
23/24 Julaị 2020
27/28 Julaị 2020
Nkwenye afọ maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ
Na June 2020, wardgwọ Ọrụ cogwọ haziri nzukọ ogbako na-egosi na nkwenye afọ. Onye ndu anyị bụ John Carr, OBE, odeakwụkwọ nke Njikọ Aka'smụaka nke UK na Nchedo Ntanetị. Isiokwu a bụ mkpa maka iwu nyocha afọ maka ikiri ihe gba ọtọ. Ihe omume a gụnyere ndị na-akwado ọdịmma ụmụaka, ndị ọka iwu, ndị gụrụ akwụkwọ, ndị ọrụ gọọmentị, ndị na-amụ gbasara akwara na ụlọ ọrụ teknụzụ sitere na mba iri abụọ na itoolu. Nke a bụ bipụtara akụkọ ikpeazụ.
Nzukọ a nyochara:
Childrenmụaka nwere ikike ichedo site na mmerụ ahụ ma ndị steeti nwere ọrụ iwu kwadoro ịnye ya. Karịa nke ahụ, ụmụaka nwere ikike iwu nyere ha ezigbo ndụmọdụ. Na ikike inweta agụmakwụkwọ zuru oke, afọ kwesịrị ekwesị banyere mmekọahụ yana akụkụ ya nwere ike ịrụ na mmekọrịta siri ike, na mmekọrịta obi ụtọ. Nke a kachasị mma maka ọnọdụ ahụike na agụmakwụkwọ ọha na eze. Childrenmụaka enweghị ikike iwu ịkwa egwu.
Teknụzụ nyocha afọ agafeela ebe usoro nwere ike ịba, usoro dị ọnụ ala dị. Ha nwere ike machibido ohere n'okpuru 18s ka online porn saịtị. Ọ na-eme nke a n'otu oge ahụ na-asọpụrụ ikike nzuzo nke ma ndị okenye ma ụmụaka.
Nkwenye nke afọ abụghị mgbọ ọla ọcha, mana ọ bụ n'ezie a mgbo. Ma ọ bụ mgbọ égbè kpọmkwem iji gọnarị ndị na-ere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị nke ụwa a ọrụ ọ bụla n'ịchọpụta mmekọrịta mmekọrịta nwoke na nwanyị ma ọ bụ agụmakwụkwọ mmekọahụ nke ndị na-eto eto.
Naanị ihe ịkwa ụta na UK ugbu a bụ na anyị amatabeghị oke mgbe usoro nyocha afọ nke ndị omeiwu kwenyere na 2017 ga-amalite. Ikpeazụ nke izu mkpebi ke Akwa Esopikpe ekeme ndinụk nnyịn iso.